Micro-Moments uye Vatengi Nzendo | Martech Zone
Indasitiri yekushambadzira pamhepo inoenderera mberi ichifambira mberi mukupa tekinoroji iri kugonesa vashambadzi kufungidzira nekupa mepu dzenzira kubatsira vatengi nemabhizinesi kutendeuka. Takaita fungidziro kusvika pano, zvakadaro. Musoro wenyaya weyeye munhu uye yekutengesa funnel yakanyanya kupisa uye inochinjika kupfuura zvataifunga.
Cisco yakapa tsvagiridzo yekuti avhareji chigadzirwa chakatengwa chine anopfuura mazana masere akasarudzika mafambiro evatengi anotungamira kwairi. Funga nezvesarudzo dzako dzekutenga uye nemabatiro aunoita pakati pekutsvagisa, online, mu-chitoro, email, kutsvaga, uye mamwe marongero sezvaunoramba uchidzika nemugwagwa kuenda kuchisarudzo. Ndosaka nei vekutengesa uye vekushambadzira vanonetseka nekupihwa zvakawandisa. Ichi chimwe chikonzero nei omni-chiteshi kushambadzira inofanirwa kunyatso kurongedzwa kuti ivandudze mhedzisiro.
Kana iwe uchikwanisa kufanotaura uye nekupa kushambadzira kunotangira rwendo rwevatengi, unogona kudzikisa kukakavara uye kuvatungamira kukutenga zvakanyanya. Muchokwadi, iko kutsvagurudza kubva kuCisco kunoratidza kuti vatengesi vanopa Internet yeZvose zviitiko inogona kutora 15.6 muzana purofiti yekuvandudza.
Sanganisa zviwanikwa izvi ne Funga neGoogle's Micro-Moments tsvagiridzo uye isu tasara ne4 micro-nguva iyo mushambadzi wese anofanira kunge achiteerera kune:
Ndinoda kuziva nguva - 65% yevatengi vepamhepo vanotarisa kumusoro ruzivo rwakawanda pamhepo kupfuura makore mashoma apfuura. 66% yevanoshandisa smartphone vanotarisa kumusoro chimwe chinhu chavakaona mukutengesa terevhizheni.
Ndinoda kuenda nguva - 200% kuwedzera kwekutsvaga "padyo neni" uye 82% yevashandisi ve smartphone vanoshandisa injini yekutsvaga kutsvaga bhizinesi remuno.
Ndinoda kuita nguva - 91% yevashandisi ve smartphone vanotendeukira kumafoni avo kune mazano pavanenge vachiita basa uye anopfuura maawa zana emamirioni ezve-zvemukati zvakatariswa paYouTube kusvika ikozvino gore rino.
Ini ndoda kutenga nguva - 82% yevashandisi ve smartphone vanotsvaga mafoni avo vachiri muchitoro vachifunga zvekutenga. Izvi zvakakonzera kuwedzera kwe29% mumashandisirwo enharembozha mugore rapfuura.
Ipo Google iri kutarisa kumushandisi we mobile, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi zvinokanganisa sei rwendo rwevatengi - kubva pakutora kusvika kumusoro kana kungovandudza. Icho chokwadi ndechekuti isu tinofanirwa kuve tiri nani zvakanyanya nezve kunongedza zvemukati zvinotyaira nguva yekutora. Wedzera vanhu masitaera ekudzidza uye zvinhu zvinokurudzira kutenga uye hazvishamise kuti nei vashambadziri vari kunetseka nekugadzira zvemukati zvinotyaira shanduko. Analytics haina kupa nzwisiso mune izvi uye ndosaka zvemukati vatengesi vari kutsvaga kune zvakawanda ruzivo mhinduro dzekufungidzira uye kuyera kuita kwavo zvemukati.
Tags: basaciscoContent Marketingkutendeukarwendo rwevatengiNdinoda kutengaNdinoda kuitaNdinoda kuendandinoda kuzivamicro-nguvamicromomentsfunga neGoogle
Boomtrain: Mashini Ungwaru Akavakirwa Vashambadzi